စည်းလုံးခြင်းရဲ့ အင်အား: ဆွေးနွေးဖလှယ် အမြင်ကျယ်
ကျွန်တော့်ရဲ့  Cbox မှာ ဆွေးနွေး ဖလှယ်ရင်း သဘောထားအမြင်များ ညှိနှိုင်းကြသူများ အားလုံးကို အထူးပင် ကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ယူ ပါတယ်။ တချို့  စာဖတ် ပရိသတ်များရဲ့ တောင်းဆိုချက်အရ ဆွေးနွေးဖလှယ် အမြင် ကျယ်ကဏ္ဍက ကောင်းနိုးရာရာများအား စုစည်းကာ ပထမပိုင်းအဖြစ် ယနေ့ ထုတ်နှုတ်တင်ပြ ပေးလိုက် ပါတယ်။ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ Nemesis ၊ Anonymous၊ ပြည်သူ၊ ဘူးခါးနဲ့ နအဖ ကြောက်ကြီးကိုးလုံးတို့အား အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် ခင်ဗျား။ ဒီကဏ္ဍကိုလည်း အပတ်စဉ် တင်ပြပေးသွားမှာမို့ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် ဆွေးနွေးကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ် ခင်ဗျား။
Anonymous: ငါပြောနေတာ မိကျောင်းမင်း ရေခင်းပြနေတာ မဟုတ်ဘူး။ တကယ့်နိုင်ငံရေးဆိုတာ ယခု မင်းတို့ကောင်တွေက ငါ့ထက် ပိုသိရင်သိမယ်.. ဒါမှမဟုတ် ငါက ပိုသိရင်သိမယ်.. သို့မဟုတ် ယခု စာတွေကို ဖတ်နေတဲ့ သူတွေက သိရင်သိမယ်။
Nemesis>>Anonymous: ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ ရငွေသုံးငွေ ဘတ်ဂျက်ကို မကြေငြာပဲမထားဘူး (ကင်ဂျုံအီး ကလွဲရင်). ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ အစိုးရငွေလဲနှုန်းနဲ့ ဘလက်ပေါက်ဈေး တမင်ဒီလောက် ခွာမထားဘူး။
ပြည်သူ>Anonymous: တို့ရောက်ဖူးတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာတော့ စည်ပင်ရဲဆိုတာ ကြားတောင်မကြားဖူးပါဘူး၊ သူတို့ရဲ့ ပုလိပ်တွေက Protect and Serve ဆိုပြီး ကျမ်းကျိန်ထားပြီး အလုပ်လုပ်ရတာပါ။
Nemesis>>Anonymous: မင်းအားရင် ဘာသာစကားနားလည်မယ် ဆိုရင်ပေါ့ သူများ နိုင်ငံတွေ ပါလီမန် တွေမှာ ၀န်ကြီးချုပ်တွေ သမ္မတတွေကို ဘယ်လို ပြန်လည် debate လုပ်ကြတယ်။ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် ဘယ်လောက်ရှိတယ်။ ကမ္ဘာက ကိုယ့်နိုင်ငံကို ဘယ်လို မြင်တယ် လေ့လာ။
Anonymous: မင်းတို့ကောင်တွေက တိုးတက်ဆဲ နိုင်ငံငယ်လေးတွေကို အားပေးမှု မရှိပဲနဲ့ အပြစ်ပဲ ပုံဖို့ကြည့်နေတဲ့ ကောက်ရုံးပုံစောင့်တဲ့ ခွေးလိုပါပဲလား... မြန်မာ့စီးပွားရေး ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးတွေနဲ့ သွားမယှဉ် နဲ့လေ...
Nemesis>>Anonymous: မင်းတို့ကို တပ်ထဲက ရိုက်ထဲ့ပေးလိုက်တဲ့ဟာတွေ၊ သတင်းစာတွေထဲက ဟာတွေ မင်းတို့လူကြီးသြ၀ါဒတွေနဲ့ ပိတ်မိမနေပါစေနဲ့။ ကမ္ဘာမှာ မင်းတို့သင်ယူစရာ အများကြီးရှိသေးတယ်။
Anonymous: မင်းတို့လို ဒီမိုရူးတွေကြောင့် တိုးတက်မှု့ နှောင့်နှေးနေတာ.. ဒါကြောင့် စီးပွားရေး ထိုက်သင့်သလောက် အောင်မြင်မှု့မရဘူး... ထပ်ပြီးသုံးလိုက်ဦးမယ်.. ဘေးထိုင်ဘုပြောတဲ့ ကောင်တွေ။
ဘူးခါး>>Anonymous: ဆင်းရဲပါတယ်ဆိုမှ အဓမ္မ အနိုင်ကျင့်၊ ပေါ်တာဆွဲ၊ သေတော့လဲ ခြိမ်းခြောက်ခံရ၊ မင်းတို.သတင်းတွေထဲမှာ အဲဒါတွေ ရေးရဲသလား၊ ရဲလက်မှာ ရယကလက်မှာ သေတာလဲ မနည်းတော့ဘူး၊ အမှုမှဖွင့်လို.မရ ။
Nemesis>>Anonymous: မင်းကလဲ ကောက်ရိုးပုံစောင့်နေတာ မင်းလား၊ ငါတို့လား၊ အရင်ပြန်ကြည့်ပါအုံး။ သုံးမရတဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့  ကောက်ရိုးပုံကြီး မင်းစောင့်နေတာပဲ။
Nemesis>>Anonymous: မင်းကိုလဲ ပြန်ပြောလို့ရတယ်။ ကိုယ့်အထက် လူကြီးတွေ အသုံးမကျ ဖြစ်နေတာကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ မစဉ်းစားပဲ မကောင်းတာကို မကောင်းဘူး ပြောသူတွေကိုပဲ လိုက်ရန်စောင် မနေနဲ့လေ။
ဘူးခါး>>Anonymous: (မင်းတို့လို ဒီမိုရူးတွေကြောင့် တိုးတက်မှု့ နှောင့်နှေးနေတာ) ဒီမိုတွေ မပေါ်ခင် နေ၀င်းလက်ထက်တုံးကတော့ ကမ္ဘာ့ အမွဲဆုံး ကြေငြာလိုက်ရတယ်လေ။ ကြွေးတွေ မဆပ်နိုင်တော့လို့။
Nemesis>>Anonymous: မင်းကိုငါတို့က ဒီစီဘောက်ထဲမှာ ပြောရုံပြောနေတာ တိုင်းပြည် စီးပွားရေးကို တကယ် မဟုတ်တရုတ်လုပ်နေတာ မင်းတို့ကောင်တွေ လုပ်နေတာ။ အရူးက လူကိုပြန်ဟစ် နေပါလား။
Anonymous: ထိုင်းသွားတယ်.. ဘယ်သွားလဲ ဗန်ကောက်၊ US ဘယ်သွားလဲ NY ... ဒီတော့ ကိုယ်ရောက်တဲ့ နေရာမှာ ကိုယ်သိသလောက်ပဲ ပြောနေတာလား..
Anonymous: ပြည်သူ မင်းရောက်ဖူးတဲ့ နိုင်ငံဆိုတာက, မင်းရောက်ဖူးတဲ့ နေရာလောက်ကိုပဲ သိမှာပေါ့.... Tourist တစ်ယောက်က သူတို့သွားတဲ့နေရာလောက်ပဲသိမှာပေါ့... တရုတ်ပြည်သွားတယ်.. ဘယ်သွားလဲ.. ဟောင်ကောင်။ဲ
Nemesis>>Anonymous: မင်းကိုငါပြောထားတာ ရှင်းရှင်းလေး၊ ဓါတ်ငွေ့တွေ ရောင်းတဲ့ ဒေါ်လာကို ၆ကျပ်နဲ့ ပြတယ်။ ၁၂၀၀ကျော်နဲ့ ပြန်ရောင်းတယ်။ အဲဒီငွေတွေဘယ်မလဲ။ အဲဒါတွေသာ အမှန်လုပ်ပါ တိုင်းပြည် ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ဖို့ လုံလောက်ပါတယ်။
Anonymous: ဘူးခါး.. စီးပွားရေး ဘာကြောင့် ပိတ်ဆို့ရလဲဆိုတာတော့ မပြောတော့ဘူး... တစ်ခုပဲပြောမယ်.. မင်းတို့ ပထွေးအားကိုး ငတေမျိုးတွေကြောင့်၊ တိုင်းပြည်ကို နစ်တစ်ထက် နစ်အောင် လှုံဆော်မှု့တွေကြောင့် အခုလိုဖြစ်နေရတယ်။
Nemesis>>Anonymous: မင်းတို့ သတင်းစာတွေမှာပဲ ကြေငြာနေတာပါ တိုင်းပြည် တိုးတက်နေတယ်။ စည်ပင်အေးချမ်းနေတယ်။ သူပုန်တွေငြိမ်းနေတယ်။ မင်းပြောသလို နစ်သထက် နစ်နေတယ် မပြောပါလား။
ပြည်သူ: တို့စစ်ဘိုရှုပ်တွေရဲ့ တိုးတက်ဆဲ(နှစ်ငါးဆယ်ကြာ ဒီပုတ် ဒီပဲ) နိုင်ငံတော်ကြီးကို အားပေးချင်လွန်းလို့၊ ဒါပေမဲ့ သူခိုးဒါးရိုးကမ်းဆိုသလို ဖြစ်မှာမို့၊ ဒီသေနာကျ ဘိုရှုပ်တွေကို အရင်ဖယ်ရှားဖို့အရေးကြီးတယ်။
Anonymous: Nemesis> မင်းတို့ ရသုံးမှန်းချေ ငွေစာရင်းကို မင်းတို့လို ဒီမိုရူးတွေ သိစရာမလိုဘူးကွယ်... ဒီငွေအကြောင်းနဲ့ပက်သက်ပြီး မီးဖိုချောင်ဥပမာပေးခဲ့ပြီးပြီ.. နောက်တစ်မျိုးပြောပါ...
Nemesis>>Anonymous: မင်းကကွာ ငါပြောနေတာရှင်းရှင်းလေး. မင်းတို့ဂတ်စ်ရောင်းနေတာ US/EU မဟုတ်ပါဘူး ဆန်ရှင်ဆိုတာ အပေါ်ယံပါ။ မင်းတို့ရောင်းနေတာတွေကို ၆ကျပ်နဲ့ပြတယ်။ ၁၂၀၀နဲ့ရောင်းတယ် ကျန်တာတွေ ဘယ်မလဲဆို။
Nemesis>>Anonymous: အရူးရဲ့ တိုးတက်နေတဲ့ နိုင်ငံတိုင်းမှာ Budget ဟာ transparant ဖြစ်ရတယ်။ ဘယ်လောက်ရတယ် ဘယ်လောက်သုံးတယ် ပါလီမန်ကဆုံးဖြတ်ရတယ်။ မင်းတို့က ဗိုလ်ချုပ် ၄ယောက်ပဲ ဆုံးဖြတ်နေတာလေ။
Anonymous: ဒါက တိုင်းပြည် အုပ်ချုပ်မှု့ Strategy တစ်ခုပဲ..
ဘူးခါး>>Anonymous: ဒီမိုတွေ မပေါ်ခင် နေ၀င်း လက်ထက်တုံးကတော့ ကမ္ဘာအမွဲဆုံး ကြေငြာ လိုက်ရတယ် ကြွေးတွေ မဆပ်နိုင်တော့လို.။....စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့တာတွေလဲ မရှိသေးဘူးကွ ဗိုလ်ချုပ်တွေ အုပ်ချုပ်ခဲ့တာဘဲ။
Nemesis>>Anonymous: မင်းတို့တွေ Timber, jewelတွေ အနောက်နိုင်ငံတွေကို တင်ပို့မရဘူးလို့ ဆန်ရှင်က လုပ်တယ်။ မင်းတို့နဂိုကတည်းကလဲ တင်ပို့နေတာ အဲဒီနိုင်ငံတွေမှမဟုတ်ပဲ။ ပြောချင်တာက နဂိုကရနေတဲ့ ငွေရလမ်းတွေ ဆန်ရှင်နဲ့ ဘာမှကိုမဆိုင်။
Anonymous: Nemesis> ဒါဆိုရင် မင်းတို့ ရဲ့ ဆရာကြီး US ကကော သူတို့ အစ်ကို ဘင်လာဒင်ကိစ္စက စလို့ စစ်သားဘယ်နှစ်ယောက် သေတယ်ဆိုတာတွေ၊ ဖြစ်နေတဲ့ စစ်ပွဲတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး အတိအကျ စာရင်း ဖော်လား.. မလိုဘူးလေ။
Nemesis>>Anonymous: ရော့အဲဒါ CNNက ကြေငြာထားတဲ့ တရားဝင် စာရင်း http://edition.cnn.com/SPECIALS/2003/iraq/forces/casualties/
Nemesis>>Anonymous: ဘင်လာဒင်ကြောင့် သေတာဘယ်နှစ်ယောက် Iraq မှာဘယ်နှစ်ယောက် အခုထိ စာရင်းနဲ့အင်းနဲ့ ကြေငြာသပ.. စစ်အသုံးစရိတ်နဲ့တကွ ကြေငြာသပ။
Nemesis>>Anonymous: ရော့အဲဒါ စစ်အသုံးစားရိတ် http://www.whitehouse.gov/omb/rewrite/budget/fy2008/defense.html
Nemesis>>Anonymous: မင်းကွာ မပြောခင် တချက်လောက်အရင် ဂူဂယ်လိုက်ပါလား အခုတော့ မင်းမသိ တာ ငါတို့သိကုန်ပီ။
Nemesis>>Anonymous: အင်းပါ.... ဘာအကျိုးမှမရှိပဲ အငြင်းမပွားချင်ဘူး။ ဝေးနေတာကိုနီးအောင် ဆွေးနေတာကို ကောင်းအောင်၊ ပြတ်နေတာကို ဆက်အောင် ဆွေးနွေးတာမျိုးပဲ ဖြစ်ချင်တယ်။ မင်းက အစိုးရ ဆန့်ကျင်သူတိုင်း အသားလွတ် လာရမ်းတာကိုး။
Nemesis>>Anonymous: မင်းကိုပြောပြမယ် အနီးစပ်ဆုံး အင်ဒိုနီးရှား model ကိုပဲ ယူပါအုံး။ အင်ဒိုမှာလဲ မင်းတို့ Constitutionလိုပဲ စစ်တပ်ပါဝင်တဲ့ ပါလီမန်ဖြစ်ခဲ့တာပဲ။
Anonymous: Nemesis ဒါဆိုရင် အင်ဒိုနီးရှားက အုပ်ချုပ်ပုံလေး တစ်စိတ်လောက်ပြောပြပါလား....
Nemesis>>Anonymous: ဒါပေမယ့် အဲဒီစနစ်ဟာ မကောင်းဘူးဆိုတာကို ပြုပြင်ဖို့လုပ်ခဲ့တာ အခု လက်ရှိ သမ္မတပြန် အရွေးခံရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ် Susilo ပဲ။ မင်းတို့က အဲဒီထက်ဆိုးတဲ့ အခြေခံဥပဒေကြီးကို အသက် သွင်းနေတယ် ။
Nemesis>>Anonymous: အင်ဒိုနီးရှားမှာလဲ အရင်ဆူဟာတိုလက်ထက်က မင်းတို့လိုပဲ သူက တိုက်ရိုက် ခန့်တဲ့ စစ်ဗိုလ်အမတ်တွေ ရှိခဲ့တာပဲ။ ဒါပေမယ့် ဆူဟာတို သိပ်အာဏာရှင် ဆန်လွန်းလို့ သူ့ကို ဖြုတ်ချ လိုက်တော့ အင်ဒိုနီးရှား စစ်တပ်ဟာ သမာသမတ်ကျခဲ့တယ်။
Nemesis>>Anonymous: အဲဒီ မကောင်းတဲ့ အင်ဒိုနီးရှား အာဏာရှင်ရေးခဲ့တဲ့ အခြေခံဥပဒေကို စစ်ဗိုလ်ချုပ် ကိုယ်တိုင်ကပဲ ပြန်ပြင်ပေးခဲ့တယ်။ အခု သူအုပ်ချုပ်တာ သူ့နိုင်ငံ ကောင်းတဲ့အတွက် သူ့ကိုထပ် ရွေးကြတယ်။
Nemesis>>Anonymous: အင်ဒိုနီးရှား ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ နအဖ စစ်ဗိုလ်တွေထက် သာတာက သူတို့ဟာ ပညာတတ်တယ် ကမ္ဘာမှာ ၀င်ဆန့်တယ်။ အဲဒီတော့ အမြော်အမြင်ရှိတယ်။
Anonymous: အခုပြောနေတဲ့ ဆရာတို့ ဒါဆိုရင် လက်ရှိမြန်မာပြည်ကြီးကို ဘယ်လိုလုပ်ရင် တိုးတက်မလဲ၊ ဘယ်လို အုပ်ချုပ်ရင် တိုးတက်မလဲ၊ ဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရင် တိုးတက်မလဲ။ ဖြေပေးပါ...
ဘူးခါး>>Anonymous: (ဘယ်လိုလုပ်ရင် တိုးတက်မလဲ၊ ဘယ်လို အုပ်ချုပ်ရင်တိုးတက်မလဲ၊ ဘယ်သူ အုပ်ချုပ်ရင်တိုးတက်မလဲ။ ဖြေပေးပါ...) ဒီမိုကရေစီစံနစ်ကို ပြည်သူတွေလိုလား တင်မြှောက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်က ဦးဆောင်ပြီးသွားရမယ်၊
Nemesis>>Anonymous: ဦးဆောင်မှုကို မင်းတို့ မယူရဘူး မပြောလိုဘူး။ ဒါပေမယ့် အတိုင်းတာ ဆိုတာရှိရတယ်။ နိုင်ငံရေး ပြောင်းလဲမှုတိုင်းမှာ အားလုံးပါဝင်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ရမယ်။ စစ်တိုက်ရုံနဲ့ တိုင်းပြည် ထိန်းမထားနိုင်ဘူးမှန်း မင်းလဲသိမှာပဲ။
ပြည်သူ>Anonymous: Anonymous ဆိုတဲ့ကောင် ကျား ကျားအော်ပြီး ဝင်လာပြီး ခုတော့ ကျမမှာ မီးယပ်ရှိပါတယ်ရှင် ဖြစ်သွားရော။
Anonymous: တပ်မတော်ဟာ လက်ရှိအုပ်ချုပ်မှု့ထက် ဆိုးသွမ်းသော ဥပဒေပြုမှု့၊ စီရင်မှု့တွေကိုမှ မလုပ်၊ မရည်ရွယ်ဘူး။ မင်းတို့လဲ တိုင်းပြည် ဆင်းရဲတာကို မလိုချင်ဘူး။ ငါတို့လည်း တိုင်ပြည်ဆင်းရဲတာကို မမြင် ချင်ဘူး။
ဘူးခါး>>Anonymous: (တပ်မတော်ဟာ လက်ရှိအုပ်ချုပ်မှု့ထက် ဆိုးသွမ်းသော ဥပဒေပြုမှု့၊ စီရင်မှု့တွေကိုမှ မလုပ်၊ မရည်ရွယ်ဘူး)။ ဒါဆိုရင် ဆိုးသွမ်းတဲ့ လက်ရှိစံနစ်ဆိုးကြီးကို ဘာ့ကြောင့် တပ်မတော်က ကာကွယ်နေသလဲ။
ဘူးခါး>>Anonymous: ထပ်ပြောမယ်၊ ဒီမိုကရေစီစံနစ်ကို ပြည်သူတွေလိုလား တင်မြှောက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်က ဦးဆောင်ပြီး သွားရမယ်။ ဒါမှ ကမ္ဘာ့ဘဏ်အသီးသီး- နည်းပညာအသီးသီးနဲ့ အကူအညီရမယ်။ တရုတ်က သူ့ဖါသာ သူတောင် အနိုင်နိုင်။
နအဖ ကြောက်ကြီးကိုးလုံး - နအဖအာဏာ ထိခိုက်မှာ သေရမှာထက်“ကြောက်” ။
နအဖ ကြောက်ကြီးကိုးလုံး - သံဃာတော်များ မေတ္တာပွား စည်ကား လျှောက်မှာ “ကြောက်” ။ တိုင်းရင်း သားများ ညီညွတ်ထွား ခွန်အားတက်မှာ “ကြောက်” ။
နအဖ ကြောက်ကြီးကိုးလုံး - အောင်ဆန်းစုကြည် ပြည်.“ရတီ” ဦးဆောင်ချီမည် “ကြောက်” ။ ဒို့များပြည်သူ ယိုင်းပင်းကူ- အင်အားယူမည်“ ကြောက်” ။
နအဖ ကြောက်ကြီးကိုးလုံး - ကမ္ဘာတလွှား သတင်းများ လွင့်ပါးလာမှာ “ကြောက်” ။ ပေါ်လွင်ထူးခြား လူအများ ကျော်ကြားလာမှာ “ကြောက်”။
နအဖ ကြောက်ကြီးကိုးလုံး - လူတွေဝုန်းဝုန်း တပြုံးပြုံး စုရုန်း ညီမည် “ကြောက်” ။ ပညာစမ်းပွင့် ပွဲလည်တင့် မျက်စေ့ပွင့်မှာ “ကြောက်” ။
ကဲ......ချစ်စွာသော စာဖတ်ပရိသတ်များရဲ့  ဆွေးနွေးခန်းကို ဒီတစ်ပတ်တော့ ဒီတွင်ဘဲ ကြောက်ကြီးကိုးလုံးနဲ့ အဆုံးသတ် ရပ်နားလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျား။ အားလုံး ရွှင်လန်း ချမ်းမြေ့ကြပါစေ။